Ndi ozo: Chọpụta, Meewanye, Tụọ, Kwalite, Ọchịchị | Martech Zone
Ndị ụlọ ọrụ anaghị eji ikike dị ike ha nwere n’ime arụ ọrụ ma a bịa n’ihe gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Anyị na-elele oge niile ka ụlọ ọrụ na-eji mmadụ 1 ma ọ bụ 2 na-elekọta mmadụ mgbasa ozi folks iji jikwaa ụlọ ọrụ na-elekọta mmadụ media ọnụnọ. Ha na-arụsi ọrụ ike, ha na-ekesa oke ọdịnaya, mana ha nọ na afụ nke ha ma a bịa n'ịkwalite ọdịnaya ha. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịsọ mpi n'ezie, gịnị kpatara na ị naghị enye ndị ọrụ gị nsogbu iji nyere gị aka ịkwalite ọnụnọ gị n'ịntanetị?
Oti mkpu na-enye ụlọ ọrụ ohere inyocha ma melite mmekọrịta mmadụ na ibe ha site na ime ka ọ dị mfe maka ndị ọrụ ịkesa ọdịnaya na-atọ ụtọ ma dịkwa mfe maka ndị na-ere ahịa iji soro na nsonye ha na iru.
Ngwa dị mma ma dị mfe. Ndị ọrụ gị jikọtara netwọk mmekọrịta ha, tinye mgbakwunye ihe nchọgharị, na nbanye. N'akụkụ aka ekpe, ị dee ihe ịchọrọ ịkekọrịta, tinye ihe ndekọ ederede maka ndị ọrụ gị, wee pịa nkwalite! Ugbu a ndị ọrụ gị ọ bụla ga-ahụ ọdịnaya iji kwalite na ihuenyo ha:
Olee otu ndi ozo na aru oru?
Chọpụta - Ndị ọrụ na-abanye na sistemụ Addvocate ma melite profaịlụ, na-egosi gị kpọmkwem onye na-anọchite anya akara gị na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Enwere ike ịhazi profaịlụ niile site na otu, nyocha ya site na aha, njikwa Twitter, ngalaba ma ọ bụ ọbụlagodi nka iji nweta ntanetị zuru ezu na nke ahaziri iche. Nke a na - eme ka ọ dị mfe nghọta soro onye na - arụ ọrụ, mmadụ ole ha na - arụ, na otu onye ọ bụla si arụ ọrụ n’ime nzukọ gị.
Amplify - Mgbe onye ọrụ chọtara ihe na-atọ ụtọ n'ịntanetị, ha na-pịa mgbakwunye Mgbakwunye na ihe nchọgharị ihe nchọgharị ha iji tụọ post ahụ na ndị ọrụ ibe, na-agbakwunye nkọwa dị nkenke nke ọdịnaya ahụ na ihe kpatara ya ji dị mkpa. Ka ndị ọrụ na-agagharị na mmiri iyi ha, ha nwere ike ịhọrọ ihe ha chọrọ ịkekọrịta na netwọkụ ha, kwuo okwu na post, ma gaa n'ihu mkparịta ụka site na ịtụ aro ọdịnaya ndị ọzọ dị mkpa.
agafeghị oke (Naanị Enterprise Edition) - Ozugbo onye ọrụ na-atụ aro post, ọ na-abanye n'ahịrị imeru ihe oke, ebe ndị na-eme nhazi gị na-enyocha ma kwado iji hụ naanị ọdịnaya kwesịrị ekwesị na-akọrọ. Moderators nwekwara ike ịtọọ oge mgbe posts banyere iyi, ma na-akwado ọdịnaya ka ụfọdụ ndị mmadụ n'otu n'otu, otu, ma ọ bụ ngalaba iji gbaa ume ịkekọrịta bara uru.
Tụọ - Onye mmekorita nchịkọta ka ị soro ihe niile, gụnyere obere URLs na Koodu mkpọsa, iji chọpụta ezi mmekọrịta mmadụ na ibe gị. Nwere ike ịchọpụta kpọmkwem ihe ndị mmadụ na-ekwu, otu netwọkụ ha na-aza, yana ndị nnukwu ụlọ mgbasa ozi soshal midia gị.
-ebuli - Na-agbasawanye iru gị site na iji Addvocate's nchịkọta iji melite ma nụchaa ozi gị. Mepụta ọdịnaya a haziri ahazi iji mee ka isiokwu ndị a ma ama mara, soro ụbọchị kachasị ọrụ n'izu, yana ọdịnaya ndị ọrụ gị kachasị emetụta.
Na-achịkwa (Enterprise Edition Only) - Na Addvocate sistemụ, ndị ọrụ kpọrọ ma nye ohere ịnweta akara akaụntụ. Ozugbo ha si na nzukọ ahụ pụọ, akwụkwọ ikike ndị a nyere ozugbo ga-agwụ, na-enye ohere ịnweta usoro ịbụ usoro dị mfe karị.
Tags: Oti mkpuAmplifyNa-achịkwaChọpụtaTụọebuli
Ọkt 1, 2013 na 9:22 AM
Daalụ maka ịkekọrịta Doug! Ọ bụ ihe dị egwu ọgụgụ! Daalụ maka inye isi!